သြဇီမှာတောင် အလှောင်ခံနေရတဲ့ ယူနိုက်တက်အသင်း။ ဘယ်သူတွေက ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ လှောင်လိုက်ကြတာလဲ? – Myan Ball
သြဇီမှာတောင် အလှောင်ခံနေရတဲ့ ယူနိုက်တက်အသင်း။ ဘယ်သူတွေက ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ လှောင်လိုက်ကြတာလဲ?
Posted on July 11, 2019 by hein
ရာသီကြို ခြေစမ်းပွဲများ ကစားဖို့ အတွက် သြစတြေးလျ နိုင်ငံ၊ ပါ့သ်မြို့ကို ရောက်ရှိနေတဲ့ ယူနိုက်တက် အသင်းကို သြဇီမှ လီဗာပူး ပရိသတ်များက လှောင်ပြောင်မှု တစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိ ရပါတယ်။ ယူနိုက်တက် အသင်း အနေနဲ့ ပါ့သ်မြို့ရှိ ဝါကာ အားကစားကွင်းမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ကွင်းဖွင့် လေ့ကျင့်ရေး အစီအစဉ် တစ်ခုမှာ အခုလိုပဲ လီဗာပူး ပရိသတ်များက လေယာဉ်ပျံ အသုံးပြုကာ လေယာဉ်နောက်ပိုင်းမှ Liverpool FC – 6x European Champions ဆိုတဲ့ စာတန်းကို ချိ်တ်ဆွဲထားပြီး လီဗာပူး အသင်းရဲ့ အောင်မြင်မှုနဲ့ အတူ ယူနိုက်တက် အသင်းကို ရည်ရွယ်ပြီး လှောင်ပြောင်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယူနိုက်တက် အသင်းရဲ့ လေ့ကျင့်ရေး အစီအစဉ်ကို လာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့ ပရိသတ်ပေါင်း (၁၂,၀၀၀) ကလည်း အဆိုပါ ဖြစ်ရပ်ကို မြင်တွေ့ခဲ့ကြပြီး အဆိုပါ အဖြူရောင် လေယာဉ်ပျံကို ပရိသတ် တစ်ဦးတည်းက ဒါမှမဟုတ် အုပ်စုဖွဲ့ပြီး ငှားရမ်းခဲ့ကြသလားဆိုတာကိုတော့ သိရှိရခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လီဗာပူး ပရိသတ်တွေကတော့ ခရစ်ကတ်ကွင်း အတွင်း၌ ယူနိုက်တက် အသင်း လေ့ကျင့်ခန်း ဆင်းနေတဲ့ အချိန်ကို ကိုက်ပြီး အခုလိုပဲ ချိန်သားကိုက် လှောင်ပြောင်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လီဗာပူး အသင်းဟာ နည်းပြ ယာဂင်ကလော့ပ်ရဲ့ လက်ထက်မှာ ခြေစွမ်းပိုင်း သိသိသာသာ တိုးတက်လာခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီမှာ ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလားကို လွဲချော်ခဲ့ရပေမယ့် ချန်ပီယံလိဂ် ပြိုင်ပွဲမှာတော့ ဆုဖလား ရယူနိုင်ခဲ့ကာ အဆိုပါ ဆုဖလားဟာ သူတို့ အတွက် (၆) ကြိမ်မြောက် ဥရောပ ဆုဖလားလည်း ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ယူနိုက်တက် အသင်းဟာ ယခု ရက်သတ္တပတ် အတွင်းမှာပဲ ပါ့သ်ဂလိုရီ အသင်းနဲ့ ရာသီကြို ပထမဆုံး ခြေစမ်းပွဲ ယှဉ်ပြိုင် ကစားသွားမှာ ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ လိဒ်စ်ယူနိုက်တက် အသင်းနဲ့ ခြေစမ်းပွဲ ဆက်လက် ကစားသွားမှာ ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရှိ ရပါတယ်။
ရာသီကွို ခွစေမျးပှဲမြား ကစားဖို့ အတှကျ သွစတွေးလြ နိုငျငံ၊ ပါ့သျမွို့ကို ရောကျရှိနတေဲ့ ယူနိုကျတကျ အသငျးကို သွဇီမှ လီဗာပူး ပရိသတျမြားက လှောငျပွောငျမှု တဈခု ပွုလုပျခဲ့ကွောငျး သိရှိ ရပါတယျ။ ယူနိုကျတကျ အသငျး အနနေဲ့ ပါ့သျမွို့ရှိ ဝါကာ အားကစားကှငျးမှာ ပွုလုပျခဲ့တဲ့ ကှငျးဖှငျ့ လကေ့ငျြ့ရေး အစီအစဉျ တဈခုမှာ အခုလိုပဲ လီဗာပူး ပရိသတျမြားက လယောဉျပြံ အသုံးပွုကာ လယောဉျနောကျပိုငျးမှ Liverpool FC – 6x European Champions ဆိုတဲ့ စာတနျးကို ခြိတျဆှဲထားပွီး လီဗာပူး အသငျးရဲ့ အောငျမွငျမှုနဲ့ အတူ ယူနိုကျတကျ အသငျးကို ရညျရှယျပွီး လှောငျပွောငျခဲ့ကွတာ ဖွဈပါတယျ။
ယူနိုကျတကျ အသငျးရဲ့ လကေ့ငျြ့ရေး အစီအစဉျကို လာရောကျကွညျ့ရှုတဲ့ ပရိသတျပေါငျး (၁၂,၀၀၀) ကလညျး အဆိုပါ ဖွဈရပျကို မွငျတှခေဲ့ကွပွီး အဆိုပါ အဖွူရောငျ လယောဉျပြံကို ပရိသတျ တဈဦးတညျးက ဒါမှမဟုတျ အုပျစုဖှဲ့ပွီး ငှားရမျးခဲ့ကွသလားဆိုတာကိုတော့ သိရှိရခွငျး မရှိသေးပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ လီဗာပူး ပရိသတျတှကေတော့ ခရဈကတျကှငျး အတှငျး၌ ယူနိုကျတကျ အသငျး လကေ့ငျြ့ခနျး ဆငျးနတေဲ့ အခြိနျကို ကိုကျပွီး အခုလိုပဲ ခြိနျသားကိုကျ လှောငျပွောငျခဲ့ကွတာ ဖွဈပါတယျ။
လီဗာပူး အသငျးဟာ နညျးပွ ယာဂငျကလော့ပျရဲ့ လကျထကျမှာ ခွစှေမျးပိုငျး သိသိသာသာ တိုးတကျလာခဲ့ပွီး ပွီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီမှာ ပရီးမီးယားလိဂျ ဖလားကို လှဲခြျောခဲ့ရပမေယျ့ ခနျြပီယံလိဂျ ပွိုငျပှဲမှာတော့ ဆုဖလား ရယူနိုငျခဲ့ကာ အဆိုပါ ဆုဖလားဟာ သူတို့ အတှကျ (၆) ကွိမျမွောကျ ဥရောပ ဆုဖလားလညျး ဖွဈခဲ့ရပါတယျ။ ယူနိုကျတကျ အသငျးဟာ ယခု ရကျသတ်တပတျ အတှငျးမှာပဲ ပါ့သျဂလိုရီ အသငျးနဲ့ ရာသီကွို ပထမဆုံး ခွစေမျးပှဲ ယှဉျပွိုငျ ကစားသှားမှာ ဖွဈပွီး နောကျတဈပတျမှာတော့ လိဒျဈယူနိုကျတကျ အသငျးနဲ့ ခွစေမျးပှဲ ဆကျလကျ ကစားသှားမှာ ဖွဈကွောငျးလညျး သိရှိ ရပါတယျ။
အဂွေရို ဂျာစီကို ပေါင် (၂၀၀) နဲ့ လေလံဆွဲဝယ်ယူပြီး ခြေထောက်နဲ့ကြမ်းတိုက်ပြခဲ့တဲ့ ယူနိုက်တက် ပရိသတ်
မော်ရင်ဟိုပစ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့ ကစားသမားကို ခေါ်ယူဖို့ကြိုးစားတော့မယ့် ယူနိုက်တက်
မန်ယူနိုက်တက်အသင်းသည် ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ကို အိုးထရက်ဖို့ဒ်သို့ ခေါ်ယူရန်အတွက် ယခုတစ်ပတ်တွင် ဆွေးနွေးမှုများ စတင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ A Bola မှ အဆိုအရ အိုလီဂန်နာဆိုးလ်ရှားသည် ယခုရာသီအပြောင်းအရွှေ့အတွက် ၄င်းရဲ့ နောက်ထပ်ပစ်မှတ်အတွက် လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီး လာမည့်ရက်အနည်းငယ်မှာပင် စပို့တင်း ထံသို့ […]
ယခုတစ်ပတ်မှာ ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်အတွက် ဆွေးနွေးမှု စတင်တော့မည့် မန်ယူ
ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ကွင်းလယ်လူ ဒန်နီဆယ်ဘီလော့စ်ကို အာဆင်နယ်အသင်းသည် အငှားဖြင့် အပြီးသတ်ခေါ်ယူနိုင်တော့မည်ဟု သတင်းများထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ်ကစားသမားသည် မက်ဒရစ်တွင် ပထမပွဲထွက်ခွင့်နေရာအတွက် ရုန်းကန်ခဲ့ရပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်တွေတုန်းက အသင်းတော်တော်များများရဲ့ ဆက်သွယ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခင်က ထွက်ပေါ်လာသော စပိန်သတင်းစာရဲ့ သတင်းတစ်ခုအရ […]
ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ကွင်းလယ်လူကို အငှားဖြင့် ခေါ်ယူနိုင်တော့မည့်အာဆင်နယ်အသင်း